लाश, कङ्काल र हड्डीमाथि उभिएर लेख्नु... सानो आँटले कल्पनै गर्न सकिन्नँ | साहित्यपोस्ट
यो पुस्तक आएको केही समयपछि एकजना वयस्क लेखकले मलाई फोनमा भन्नुभयो, ‘सर, मलाई चैँ मन परेनन् कथा । यस्तो निराशै निराशा पनि हुन्छ?’ प्रश्न करोडको हो । उत्तर कहाँ छ? विसङ्गति लेख्ने लेखकले उत्तर दिँदैनन् । उनीहरू उत्तरभन्दा अलि पर, अथवा अलि माथि हुन्छन् । ब्याकेटका सन्तान जो हुन् ।
महेश पौड्याल	 प्रकाशित ६ फाल्गुन २०७८ १०:०१
अचेल नियात्रा पढ्ने तल लागेको छ । पाएसम्म पढ्छु । भ्याएसम्म पढ्छु । पाइनँ भने, अथवा भ्याइनँ भने पढ्दिनँ । तर अतृप्तिले घोचिरहन्छ । चिमोटिरहन्छ ।
तर यो लेख नियात्राका बारेमा होइन ।
नियात्रामा एउटा समान कुरा के भेट्छु भने अप्रतीम प्रकृतिको वर्णन पाइन्छ— हरिया वन–उपवन, नीला दह, निश्छल नदी, उन्नत शिखर, भरिला खेत–खलिहान । यी वर्णनका बीचबीचमा नियात्राकारहरूभित्रको कवि उम्लिएर आउँछ । कि गीत छोडेर जान्छ, कि कविता ।
विशुद्ध कविताको कुरा त छँदैछ — झरनाजस्तो । निर्झर वर्षाजस्तो । मोहक प्रतिकिसँगको साक्षत्कारबाट उठेको रुमानी सिर्जनाको उभार ।
यो एउटा पक्ष हो सिर्जनाको । पूरा होइन ।
तर, यसबाट सिर्जनको एउटा सिद्धान्त जन्मेर उठ्छ — उदात्त प्रकृति उन्नत सिर्जनको एउटा स्रोत भने अवश्यै पनि हो ।
हो नै ।
यो कुरा त महामुनि वाल्मीकिकै समयदेखि प्रमाणित भएर आएको कुरा हो । केलाउँदै जाने हो भने आधाभन्दा बढी साहित्यिक सिर्जनको स्रोत उदात्त र सुन्दर प्रकृति नै हो ।
यसको ठ्याक्कै विपरीत सर्जकहरूको एउटा विरादरी छ, जो प्राकृतिक सौन्दर्यको अन्तिम किल्ला कटेपछि सिर्जना टिप्छ । अक्करमा । भीरमा । मरुभूमिमा । युद्धले क्षतविक्षत कुरुक्षेत्रमा । लाशहरूमा । कङ्कालमा । धुवाँमा । श्माशानहरूमा ।
हुन त रस–सिद्धान्तमा रौद्र वा विभत्स रसको कुरा इतिहासजत्तिकै पुरानो छ । तर, वीभत्स दृश्यले हत्तपत्त सिर्जना फुराउने कुरोचाहिँ अलि ‘जरा हट के’ नै हो । यस्ता विवरण बृहत्तर काव्यका बीचमा आइपर्ने युद्धलाई समेट्न प्रयोग गरियो होला । इलियडमा, एनियडमा, महाभारतमा वा रामायणमा यस्ता दृश्य अथेष्ठ छन् । तर यिनै दृश्य उक्त काव्यका स्रोत होइनन् । ती घुम्तीमा भेटिएका यात्रु हुन् ।
अँ, एउटा कुरा मान्छु । करूणा छचल्क्याउने वीभत्स वा कारुणित दृश्य काव्यका सिर्जनका स्रोत हुन् । यसमा त धेरै विवादै गर्नु पर्दैन । ‘मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगतः शाश्वतीः समाः’ मात्रै सम्झिए पनि जवाफ पुग्छ ।
तर यो खरानीकै डङ्गुरमाथि काव्य उभ्याउने कुरो ?
आगोकै लप्कामाथि कविता उभ्याउने कला ?
जीवनलाई अँध्यारोको कोणबाट हेर्ने कलाकारिता ?
यसको व्याख्या के हो ?
पश्चिमतिर यसो सुराकी गरियो भने, पूर्ण रूपले ज्वालामाथि नै काव्य उभ्याउने लेखक दाँते हुन् । उनको ‘इन्फर्नो’ को यात्रा गर्नु भनेको करिब करिब नर्ककै यात्रा गर्नु हो । तर, उनी धार्मिक भावनाबाट प्रेरित भएका हुन् । उनको सम्पूर्ण काव्यको बुनोट पाप र पुण्यको, अथवा धर्मशास्त्रमा वर्णित कथित स्वर्ग वा नर्कको सन्दर्भमा हो ।
यसको अर्थ, दाँतेको ‘इन्फर्नो’ को सिर्जनास्रोत खरानी होइन । त्यो एउटा नैतिक भाषण हो ।
जर्जरताबाटै अभिप्रेरित सिर्जनाका कुरा गर्दा हामीले ‘आधुनिक’ भनेर बुझेको वा जानेको समयमा पुग्नुपर्छ । यसो भनिरहँदा पनि टमस हार्डी अथवा डब्ल्यु बी यिट्सका सिर्जनको पुटमा एउटा धर्म–निर्देशित सुधारवाद छ नै । यो त कस्तो भने, भगवान्को शक्ति उत्घाटित गर्नलाई दैत्यको कल्पना गरेजस्तो ।
यो बेग्लै कुरा भयो ।
अलिकति आधुनिक साहित्यको सुराकी गरौँ है त ।
लेक्चर चैँ नहोस् । भइगयो भने, भइगयो ।
पश्चिमतिर फर्कियौँ भने माक्र्स र नित्सेको मसयसँगसँगै मान्छेले दैविक उपस्थितिमाथि औँलो ठड्याउने कला सिके ।
यसो गरिरहनुको एउटा परिणति के भयो भने, मान्छे आफू र आफ्नो अन्त्यहीन सङ्घर्षमा बाहेक अन्यत्र आफ्नो र आफ्नै जीवनको अर्थ पनि देख्न छोड्यो । सारमा मान्छे ‘अस्तित्ववादी’ भयो । यसैको किनारै किनार मान्छे शून्यवाद, निस्सरतावाद, विसङ्गतिवाद…यस्ता अनेक प्रकारका वादहरूको काखमा पछारिन पुग्यो ।
यी वादहरूको चस्मा नै कस्तो भने— भत्केको घरमा कला उभ्याउने ।
खरानीको डङ्गुरमाथि काव्य उभ्याउने ।
अपाङ्गहरूका अतृप्तिमाथि नाटक उभ्याउने ।
लाशहरूमाथि कथाहरूको ठेली उभ्याउने ।
यो पागलपन थियो?
यो अग्घोर हृदयहीनता थियो?
यो संवेदनाशून्य हुनुको द्योतक थियो?
यो के थियो? यो के हो?
कथा सुनिन्छ नि ! मध्ययुगमा प्लेग लागेर हराजौँ मान्छे मरेछन् । मरेका मान्छेका लुगा सर्वत्र । ती लुगा टिपेर तिनमाथि किताब छापियो रे ।
पूर्वीय शास्त्रमा कतै कतै पाइन्छ — मरेको मान्छेको नलीखुट्टाको यन्त्र बनाएर बजाउँदै हिँडे अरे कोही ।
नलीखुट्टालाई पनि एउटा अर्थको स्रोत मान्ने — यो चानचुने मनस्थिति भने पक्कै पनि होइन ।
मान्छेको खप्परबाट पानी खाएको त कति सुनियो कति ।
यो मनोविज्ञान खोदल्नु जरुरी छ ।
यो हृदयहीनता हो भने, यसबाट सिर्जना फुट्नु सम्भव छँदै छैन ।
होइन भने यो लाश–शास्त्र हो चाहिँ के?
यो टेलिस्कोप नेपाली साहित्यतिर फर्कायौँ भने सरुभक्त देखिन्छन् — समयत्रासदीमा । मलामीमा ।
कथामा कतै मनदमणि दीक्षित देखिन्छन् — ग्यास च्याम्बरको मृत्युमा ।
प्रेमा शाह देखिन्छिन्— पहेँलो गुलाफमा । तर, नारीको कोणबाट पुरुषको सीमान्त कुरूपताले यस कथालाई अलि अर्कै मोड लिएको छ ।
पारिजात? मेरो बुझाइ फरक छ ।
इन्द्रबहादर राई? केही कथामा । उपन्यासमा । दम छ ।
अलिअलि जीवनवादको सुरक्षाकवचभित्र धरावसी देखिन्छन् — गेस्टापोमा ।
ध्रुवचन्द्र गौतम देखिन्छन् ।
रोशन थापा नीरव देखिन्छन् ।
टुक्रा टुक्रालाई जोड्नुभन्दा टुक्रालाई नै एउटा विकल्प देख्ने यो समूह ‘नकारात्मक’ भने पटक्कै होइन । यो ‘जरा हट के’ हो ।
यसको उत्तर उनीहरूले दिन सक्थे । तर, उनीहरू उत्तर दिने समूह नै होइनन् । उत्तर दिनु भनेको कुनै न कुनै मूल्यविधानमा उभिनु हो । यी सर्जक कुनै पूर्वनिर्धारित मूल्यविधानमा उभिँदैनन् । जे निकाल्नु छ, पाठकले निकालून भन्दिएर निदाउँछन् ।
नपत्याए सोधेर हेर्नुस् त?
अन्तरवार्ता पढ्नू । भाषण सुन्नू ।
जति पानाको अन्तरवार्ता होस्, वा जति लामो भाषण होस् — सारमा आफ्नो मूल्यविधान पटक्कै खोल्दैनन् । खोक्दैनन् । हामी भएको भए…हैट । बोलाऊन् न कसैले ।
नाट्य निर्देशक एलेन स्निडरले एकचोटि बेकेटलाई सोधेछन्— तपाईंको नाटकको गोडो, वास्तवमा को हो?
बेकेटले भनेछन्— ‘मलाई थाहा भएको भए नाटकमै भनिहाल्थेँ नि म ।’
यस्तो छ ताल ।
मान्छे एउटा खुट्टो मसानमा राखेर जन्मेको प्राणी हो भन्ने बेकेटलाई गाँठी कुरो बकाउन कसले सक्ने?
भन्ने कुरा भनेर गए बेकेटले । तर नभनीकन ।
उनको श्मशान–शास्त्रले हल्ला गर्नै परेन ।
कसैले चित्रकलाको बारेमा सोध्दा भन्थे रे— अभिव्यक्त गर्नुपर्ने केही छैन ।
अभिव्यक्त गर्ने माध्यम पनि छैन ।
शक्ति पनि छैन ।
इच्छा पनि छैन ।
भन्नैपर्ने बाध्यता पनि त छैन !
हामीलाई चैँ केको बाध्यता होला?
बेकेट कस्ता भने — अर्कैतिरबाट सोच्ने । कताबाट हो कताबाट ।
एकचोटि, झलमल्ल घाम लागेको दिनमा एकजना साथीसँग लण्डनको एउटा पर्कमा घुम्न निस्केछन् । हिँड्दाहिँड्दै निकै प्रसन्न देखिएछन् । साथीले भनेछ— दिन कति रमाइलो, बाँच्ने प्रेरित गर्ने खालको, हागि!
बेकेटले जवाफमा भनेछन्— ‘त्यतिसम्म पनि नभनिहालुँ ।’
झट्ट सुन्दामा कस्ता अक्करे । घोइरे । घोर निराशावादी ।
तर ढुकढुकी छाम्न सकियो भने, जीवनको सबैभन्दा निकट यिनीहरू नै छन् ।
उनको मूलभूत कुरा यो हो — किन सुनकै सपना बाँड्नु खरानीमा उभिएर?
मानौँ कोही गम्भीर रोगले ग्रस्त छ । मृत्युशय्यामै छ । घाम झलमल्ल लाग्यो । अब त्यो घामले बचाउँछ भन्नु सत्यको निकट हो त?
कवि विल्फ्रेड ओवेनले एउटा कविता लेखेका छन् — ‘फ्युटाइलिटी’ । यानि, निरर्थकता ।
कवितामा के छ?
युद्ध मैदान । एउटा सैनिक घाइते छ । करिब करिब मरिसकेकै छ भनौँ न । अर्को सैनिक भन्छ— बाहिर घाममा लैजाऔँ । घामले बचाउँछ कि? धरती फोरेर बिउ उमार्छ, रूख हुर्काउँछु । यस मान्छेलाई कसो नबचाउला?
बचाउँदैन नै ।
यस्तोमा, मानाैँ छन्द कविता लेखियो—
मृतलाई पनि जीवन दिन्छौ दिव्य दिवाकर
तिम्रो आलोकमा हामी सास फेर्छौँ निरन्तर ।
वाह भन्नलाई त हो । तर, पत्याउनलाई?
माथि भनिएका लेखकले वाहवाहीको लोभ नगरेका हुन् । नढाँटेका हुन् । सत्य त कठोर हुन्छ नि— चिहानघारीजस्तै । निष्प्राण हुन्छ नि, खरानीजस्तै ।
प्राण भन्ने एउटा अदृश्य तन्तुले जोडेको जिन्दगी । त्यसै जोडनमा फुलेको हाम्रो अभिमान । अहङ्कार । सपना । लोभ । आकांक्षा ।
गुलिभरको यात्रावर्णन सम्झन्छु । अण्डा यो कोणबाट फुटाउने कि त्यो कोणबाट भन्दा भन्दा युद्ध गर्न उभिएका लिलिपुटवासी — हामी मान्छे । गुलिभरले हेर्दा बौना । हामी बौना ।
हामी बौनाको जीवनको यथार्थचहिँ त्यति लेखिएको छैन साहित्यमा ।
लेखे त यिनैले लेखे । तर, यनिलाई हामीले बुझेनौँ सायद । बुझ्ने कोशिस पनि त्यति गरेनाँै ।
वर्जितजस्तै बनायौँ ।
जीवनको सत्य पनि त्यस्तै डरलाग्दो छ । छैन र?
सधैँ मरेर बाँचेको एउटा मान्छे, यात्रामा निस्कन्छ । मानौँ फेवातालको किनारमा पुग्छ । भावविभोर भएर सौन्दर्यको कविता लेखेर ‘साहित्यिक योगदान’ गर्छ र फर्किन्छ । पढ्न पनि त्यही मनपर्छ । यथार्थ पढ्न त अनुहार छँदै छ नि । त्यहाँबाट केही पृथक पढ्न पो कसैको कविता किन्नु । नियात्रा किन्नु । निबन्ध किन्नु । उपन्यास पनि ।
हो आम पाठकीय सोच हो यो । तर यो यथार्थसम्मत भने पटक्कै छैन ।
उसको ३६४ दिनको जीवन–युद्ध चैँ कतै लेखिएन ।
हो, त्यही त लेखियो ब्याकेटहरूका पानामा ।
सुन्न र बुझ्न, तर, साहस चाहिन्छ ।
सायद त्यो हामीसँग छैन । अथवा, अलि कम छ । कि यति धेरै छ कि, यसको अन्धकारले छेलेर हामी मात्रै होइन हाम्रो साहित्य पनि नदेखिने भएको छ ।
यो विसङ्त लेखनमा चुर्लुम्मै डुबेर पनि उज्यालो देखिने नेपाली लेखकचाहिँ, मलाई लाग्छ, इन्द्रबहादुर राई हुन् । बुझेर हो वा नबुझेर, हामीले उनलाई देख्यौँ । उनका गम्भीर पाठकलाई थाहा छ— उनका रचना पढेर शास्त्रले दिनेजस्तो कुनै गम्भीर नैतिक शिक्षा लिन सकिँदैन । तिनमा अगाडिको कुनै उज्यालो भेटिँदैन । इतिहासको कुनै छुटेको पाटो पनि छैन । कुनै उपदेश पनि छैन ।
त्यसो भए किन इन्द्रबहादुर राई त?
हो, गाँठी कुरा यहीँनिर छ । यहीँ नै ।
बालासन र टिष्टाबीचको भूगोलमा ।
हाम्रो चेतना र अपेक्षाको बीचतिर कतै ।
इन्द्रबहादुर राईले हामीलाई के भन्न खोजे?
मोहनराज शर्माका रचनामा त्यसको आंशिक उत्तर सायद पाइन्छ । ध्रवचन्द्र गौतममा पनि ।
यो अँध्यारो, अर्थहीनता, सङ्गतिविहीनता, झट्ट हेर्दा नैराश्यको साम्राज्यजस्तो लाग्ने भूगोलबाट जीवनलाई हेर्न कम आँटिलो मस्तिष्कबाट सायद सम्भव छैन ।
रोशन थापा नीरवको कथा सङ्ग्रह अएको थियो ‘कोष्ठकभित्र हाँसो’ । त्यसको पक्षमा यस्तो भनिएछ— ‘विसङ्ग पात्रहरूको अनिर्णित वर्तमान र अस्पष्ट भविष्यसँग अन्तरक्रिया गर्ने उनका कथाको केन्द्रमा आजको मान्छे छ, र ऊसँगै लय गुमेको वा अस्थिर बन्न पुगेको उसको जीवन छ । सन्देश प्रस्ट छः थापाका कथा आदर्शवादी दृष्टिकोणबाट गरिने जीवनको व्याख्याका बर्खिलाफ छन् । उनी बहुल स्वभावका बीच आ–आफ्ना अग्रह, शक्ति र सीमा बोकेर जीवनको मैदनामा उभिएका मान्छेहरूका बीचमा बलात कुनै सङ्गति थोपर्नु भन्दा, उनीहरूको विविधता र विसङ्गतिमै जीवनको परिभाषा खोज्ने पक्षमा छन् । आदि, मध्य र अन्त्यको सूत्रबाट पृथक् र लेखकीय घुसपेठबाट पर, थापाका कथा मान्छेको मस्तिष्कका विविधातपूर्ण भावतरङ्गका आख्यानीकृति स्वरूप हुन् ।’
ए, यस्तो पो?
यो पुस्तक आएको केही समयपछि एकजना वयस्क लेखकले मलाई फोनमा भन्नुभयो, ‘सर, मलाई चैँ मन परेनन् कथा । यस्तो निराशै निराशा पनि हुन्छ?’
प्रश्न करोडको हो ।
उत्तर कहाँ छ? विसङ्गति लेख्ने लेखकले उत्तर दिँदैनन् । उनीहरू उत्तरभन्दा अलि पर, अथवा अलि माथि हुन्छन् । ब्याकेटका सन्तान जो हुन् ।
‘विसङ्गत’ मानिएका थुप्रै लेखक छन् । तिनमा, अचेल बजारमा देखिने दुई खाले ।
लेखनलाई आफैँले ‘विसङ्गत’ भन्छन् । पाठकले भन्दैनन् । लेखन पेस्टिचजस्तो छ । कोलाजजस्तो । तर जीवन? स्टन्टजस्तो । ऐयासी । प्रयोगशील । सङ्गतिपूर्ण । झकास । उत्साहले भरिएको । कुनै नयाँ ‘भोलि’को खोजीमा मस्त । प्रचारमा मस्त । मिडियावाजी डरलाग्यो । अन्तरवार्ता ।
लेखनमै जस्तो…सङ्गतिविहीन । पानी परे पनि ठिक । घाम लागे पनि ठिक । हिजो उस्तै । आज उस्तै । पुरस्कार पाए पनि माटो । नपाए पनि माटो । पदोन्नति भए पनि पृथ्वी । नभए पनि पृथ्वी । किताब आए पनि उही । नआए पनि । प्रचार भए पनि उही, नभए पनि उही ।
होइन सायद ।
निरपेक्षता चाहिँ हो ।
निरपेक्ष मान्छेले जति जीवनको परख कसैले गर्दैन ।
उसले जति जीवनको परीक्षण पनि कसैले गर्दैन ।
जीवनमा होस वा लेखनमा — निरपेक्ष हुनु असाध्यै गाह्रो छ ।
राजनीतिमा पनि ।
जीवनका जटिल प्रश्नमाथि पोखिन सक्ने मस्तिष्क असंवेनशील हो भन्न सकिँदैन । ऊ लालबुझक्कड पनि होइन । ऊ अज्ञानी पनि होइन ।
यस्तो लेखनको केन्द्रमा केही मूलभूत कुरा छन् ।
हामीले मान्छेका रूपमा बनाएको मूल्यविधानले संसारलाई धेरै नै फे¥यो होला । तर, हामीभित्रको मान्छेलाई कति फे¥यो? हामीभित्रको रिस, राग, ईष्र्या, कुण्ठा, स्वार्थ, मोह, लालसा आदि कहाँबाट कहाँ पुगे? कि त्यहीँ छन्? हामीबाट दुर्वासा कति टाढा? विचित्रवीर्य? ‘कन्फेसन्स’ का अगस्टाइन? मिस्टर फस्टस? म्यक्बेथ? कति टाढा?
लोकलाज, र निर्मित विधानको बादल एक निमेषकै लागि मात्रै पनि हट्ने हो भने हामी के के गर्छौं होला? र के के चैँ गर्दैनौँ होला?
त्यो बादलविहीन संसारको चित्रण विसङ्गत लेखनको ध्येय हो । मैले त्यसलाई राम्रो भनेको पनि होइन, नराम्रो भनेको पनि होइन । तर, त्यो हो । र, त्यो सबैभन्दा ठूलो यथार्थ हो ।
किन बाँचेका छौँ हामी? किन बाँचिरहेका छौँ?
एउटै छ उत्तर, खासमा — भोलि त केही हुन्छ कि?
भोलि त केही हुन्छ कि?
नभए, भोलिको भोलि त केही हुन्छ कि?
हाम्रो चिन्तनमा एउटा ‘भोलि त केही हुन्छ कि’ भन्ने मृगमरीचिका नहुनु भने हामी सबै लेमिङ हुन्छौँ — वन, टु, थ्री…गो ! छप्लायङ्ङ ! आत्महत्या ।
राम नाम सत्य हो ।
ब्याकेटको ‘वेटिङ फर गोडो’ त्यही अनामिक आगतको पखाइ हो सायद ।
कुरो गाजेमाजे भयो ।
भए पनि होस् ।
विसङ्गतिको कुरो गाजेमाजे नै हुन्छ ।
बालुवा । डढेलो । कङ्काल । अनिकाल । सुख्खापन । हत्या । आत्महत्या । बेलगाम यौन । नपुंसकता । समलैङ्गिक व्यवहार । जलराशिमा खसेर मरेका प्रेत ।
यस्तै यस्तै त लेखेका हुन् टि.एस इलियटले ‘द वेस्ट लैण्ड’ मा । यस्तै यस्तै लेखनको जगमा नोबेलै जित्नुपर्ने के थियो र?
कुराको अनुहारमा एउटा, भावमा अर्कै ।
लेखकलाई सबै सबै सबैभन्दा कठिन कुरा — सभ्यताभरि मान्छेले बनाएका मूल्यविधानलाई ‘इस’ भन्नु हो । कतिपय साथीहरू भन्लान्— हामीले पनि त भन्यौँ नि — इस !
विद्रोह गर्यौँ ।
क्रन्ति गर्यौँ ।
रूपान्तरण गर्यौँ ।
अग्रगमन गर्यौँ ।
गणतन्त्र । प्रजातन्त्र । लोकतन्त्र ।
जिन्दावाद चैँ लेखिनँ । पाठकले आफैँ पनि लेख्लान्, यति भनेपछि त ।
गर्यौँ । तर, यसो गरिरहँदा कसैले बनाएका अन्य मूल्यको पक्षमा गरेका हौँ । कालो दालले खाएको कचौरोलाई मुसुरोको दालले माझेका हौँ ।
न कालो दाललाई नराम्रो भनिएको हो, न मुसुरोलाई ।
तर, एउटा मूल्यविधानलाई विघटित गरेर, वा प्रश्न गरेर, अर्को मूल्यविधान बनाएको त हो नि । यी तमाम क्रान्ति र अग्रगमनका चेत नवनिर्मित हुन् र?
हजार ग्रन्थ लेखिएका छन्, तिनका सार–सङ्ग्रह गरेर ।
दो मूलभूत प्रश्न तो बनते है ।
१. आवरण त फेरियो । मान्छे फेरियो? छैन । र, मान्छे फेर्ने चँै के?
२. हामीले सकी–नसकी बनाइरहेका नयाँ मूल्यविधानले फेर्छ? ग्यारेन्टी छ?
छैन भने, उः त्यो डाँडापारि उज्यालो छ, चढेर हेर भनेर ढाँट्नुभन्दा, ढाँडापारि पनि सारमा ढाँडावारिजस्तै हो भन्नुमा श्रेय छ । छैन र?
फेवाताल हेरेर बटुलेको आह्लाद त्रिसुलीमा खसेको बस हेरेर वा खबर सुनेर सकिन्छ । कतिञ्जेल? कतिञ्जेल?
त्यसैले, यस्ता ताइँ–न–तुइँ जस्ता लाग्ने लेखनको महान दार्शनिक महत्तव तीन कुरामा छः
पहिलो, यिनले भ्रमको खेती नगरेको राम्रो भन्ने आँट गर्छन् ।
दोस्रो, मान्छेको सबैभन्दा ठूलो यथार्थ उसको नाङ्गोपन हो भन्ने सङ्कते गर्छन् ।
तेस्रो, यिनले तटस्थ र निरपेक्ष हुन सिकाउँछन् । उज्यालोमा छेलिएका ताराको अस्तित्व देखाउँछन् । अँध्यारोमा पनि पृथ्वी उसै गरी घुम्छ र स्रृष्टि उसै गरी चल्छ भन्ने कुराको बोध गराउँछन् । भ्रमको दोहोरीलाई स्थगित गरेर मृत्युगीत पनि गाउने आँट देखाउँछन् ।
अर्थात, यिनले जिन्दगीलाई जस्तो छ, त्यस्तै रूपमा छाम्न सिकाउँछन् ।
म विसङ्गतिवादी साहित्य लेख्दिनँ । त्यति बुझ्दिनँ पनि ।
तपाईंहरूमध्ये धेरैले पनि लेख्नुहुन्न होला ।
तर, यिनलाई सलाम गर्ने आँट त छ । यिनीहरू त्यो लेख्छन्, जसको छेउछाउसम्म पनि पुग्ने आँट हामी धेरै गर्दैनौँ ।
लाश, कङ्काल र हड्डीमाथि उभिएर लेख्नु… यो कल्पनै गर्न पनि सानो आँटले सकिन्नँ ।
नलीखुट्टाको यन्त्र बनाएर बजाउँछन् । पुँ ऽऽऽ
स्थगित समयका साक्षी हुन् यी ।
झुल्कँदो र अस्ताउँदो घामलाई उसै गरी पिइदिन्छन् निरपेक्ष आँखाले ।
सक्छाैँ भने हामीलाई पनि सलाम ।
६ फाल्गुन २०७८ १०:०१
पेट्रोलकाे मल्यूवृद्धि र मेरो जीवन